Linus Torvalds: systemd-ka aad uma xuma | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa laga yaabaa inaanaan fikrad ka helin Richard Stallman oo ku saabsan nidaamka illaa hadda, laakiin Linus ayaa mar kale dhiibtay wareysi uu siiyay ITWire's Sam Varghese, halkaas oo uu sidoo kale kaga hadlayo waxyaabo kale.
Marka ay timaado nidaamka, waxay iga filayaan inaan yeesho fikrado badan oo midab leh, laakiin maya. Anigu shaqsi ahaan dan kama lihi nidaamka, dhab ahaantii kumbuyuutarkayga ugu muhiimsan iyo laptop-kaygu way isticmaalaan. Hadda, anigu lama heshiin qaar ka mid ah horumariyeyaasha (anigoo tixraacaya dhacdadii Kay Sievers) waxaanan u maleynayaa inay yihiin wax yar oo taxaddar leh markay tahay cayayaanka iyo iswaafajinta, laakiin anigu kuma badna xerada dadka neceb fikradda nidaamka ama.
Miyaad ku raacsan tahay fikradda ah in nidaamku ka guurayo fikradda fudud ee nidaamyada UNIX? Taasi waa xun tahay?
Waxaan aaminsanahay in badan oo ka mid ah "fikradaha asalka ah" ee UNIX ay yihiin kuwo maskaxda ku haya oo aan ka tarjumeynin xaqiiqda. Weli qiimo ayaa ku jirta in la fahmo qaab dhaqameedka "samee hal shay oo si sax ah u samee", laakiin taasi maahan sida nidaamyada kakan ay u shaqeeyaan, mana ahan sida codsiyada waaweyn loo qorsheeyay muddo dheer. Kani waa fududeyn waxtar leh oo run ku ah heerka "cayiman", laakiin si cad uma qeexayo xaqiiqda inteeda badan. Nidaamna maahan gabalka jabiya dhaxalkii hore ee UNIX. Codsiyada muuqaalka ah ayaa dhif u shaqeeya sidan oo kale, ka dibna waxaa jira sida muuqata GNU Emacs counterexample tusaale ahaan, taas oo aan waligeed ahayn qaab fudud oo UNIX ah, laakiin kaabayaal weyn oo cusub, sida systemd. Dabcan, waxaan ahay da 'kufilan inaan jeclaado qoraalada qoraalka oo aanan kujirin binary. Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa in nidaamku uusan daruuri ahayn inuu leeyahay dhadhanka ugu fiican, laakiin waa faahfaahin.
Miyaad horey u soo martay xaalado isku mid ah, markii soo bandhigida qaab cusub oo wax loo qabto ay sababtay qadhaadh iyo falcelin xad dhaaf ah?
Haa haa. Vi vs Emacs, isbarbardhiga u dhexeeya kombuyuutarrada ama kiis u dhow nidaamka, SysV init vs BSD init. Ma hubo sida dagaallada nidaamku u kala duwan yihiin. Waa su'aal farsamo, laakiin horumariyayaasheedu runtii aad bay ugu fiicnaayeen kala fogaanshaha dadka heer shaqsiyeed. Ma ahan wax ku cusub qorraxda hoosteeda, dagaalladii u dhexeeyay kuwa difaacaya GPL iyo BSD waxay ahaayeen kuwo badan oo ku saabsan dadka ku lug leh iyo sida ay dadka uga careysiiyaan marka loo eego khilaafaadka kale.
Maxaad dhihi laheyd haddii qof ku doodo in nidaamku abuuray dhibic fashilaad ah oo aan u oggolaanaynin nidaamka inuu kabaha ka baxo haddii uu guuldareysto? Waxay udub dhexaad u tahay adeegyo badan oo haddii midkood fashilmo uusan nidaamku faaiido lahayn.
Haddii taasi sabab tahay, waa inaysan sidoo kale isticmaalin kernel. Sida iska cad waa wax gaar ah, in injineeradiisu ay yihiin dad ka fiican oo laga yaabee inay cadaalad daro tahay in la barbardhigo wax sharaf leh sida geedka oo kale oo leh mashaariic badan oo aan caadi ahayn. Laakiin haddaad eegto mashaariic gaabis ah oo culus sida glibc, markay xoqdaan dhammaantood way dhaawacmaan.
Waxaan tan u weydiiyay maxaa yeelay waxaan arkay maqaallo dad u guuraya BSD oo ku jira server-yada. Ma aanan arkin dabeecadahaas aadka u daran, laakiin waxaan ku jiray Linux illaa '98.
Caadi ahaan ma raaco dabeylahaas, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa in hal shay oo isbeddelaya ay tahay in dadku ay u qaadanayaan dhaqankaas argaggaxa leh, argagax populist si dhab ah. Kaliya kuma eka saxaafadda farsamada laakiin adduunka farsamada waxaa kale oo jira "qaybo ra'yi" iyo buunbuuninno kale oo la xidhiidha. Dadka BSD-na waxay leeyihiin erey taas ah: 'Baaskiil lagu rinjikeeyay' *, oo ku saabsan sida dadka aan kala sooca lahayn u dareemaan inay awood u leeyihiin inay ka wada hadlaan arrimaha guud, maxaa yeelay qof kastaa wuxuu dareemayaa inuu fikrad ka dhiiban karo doorashada midabka. Marka arrimaha dusha ka sarreeya waxay leeyihiin buuq badan. Laakiin markay tahay go'aamo adag oo qoto dheer oo farsamo, waxay u arkaan (mararka qaarkood) inaysan aqoon badan u lahayn taasna waa sababta aysan u hadlin inta badan.
Waad aqrisay Dukumintiga cusub ee Lennart Poettering ku saabsan diyaarinta qaybinta nidaamka faylka Btrfs ee caadiga ah? Hadday sidaas tahay maxaad u malayn?
Si aad ah uma hubo inay daruuri tahay sida saxda ah ee wax loo sameeyo, laakiin runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay dadku ku shaqeynayaan jihadaas. Qaabka baakadka hadda jira ayaa loo jabiyey codsiyo dhinac saddexaad ah, mana ku qanco inay taasi wanaagsan tahay xitaa mashaariicda loogu qaybiyo qaybinta Linux oo qayb ka ah udub dhexaadkooda. Ma yihiin faahfaahinta saxda ah ee sida loo isticmaalo Btrfs si loo hirgeliyo tan saxda ah ee la sameeyo? Wax fikrad ah maleh. Waa dhibaato cakiran oo aan lagu xalin doonin habeenimadii iyadoo la adeegsanayo wax cusub oo xagjir ah, waxaanan ka shakisanahay moodooyin casri ah oo cusub oo wax walba beddelaya oo sheegaya in ay xallinayaan dhibaatooyinka (laga yaabee inay cusub tahay, kakanaanta iyo faahfaahinta casriga ah ay adag tahay in la yiraahdo in aysan 'haysan' dhibaatooyinka nidaamyada jira ay leeyihiin, marka waxaa loo arkaa dood in dhibaatooyinku aysan sii jirin - mana ahan inay weligood sii socdaan, laakiin maxaa yeelay waxay noqdeen kuwo aad u adag in laga wada hadlo maxaa yeelay wax badan baa is beddelay ). Laakiin waxaan qabaa inay tahay dhibaato mudan in la fiiriyo.
* rinjiyeynta saxanka baaskiilka wuxuu noqon doonaa tarjumaadiisa Isbaanishka. Faahfaahin dheeri ah Halkan y Halkan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linus Torvalds: systemd-ka ma xuma
Taasna wuxuu daqiiqad yar ku damiyaa ololka (maxaa yeelay Linus sidoo kale wuxuu ololkiisa la sameeyay Tanembaun oo ku saabsan mowduucyada monolithic iyo micronuclei).
Linus marwalba wuu kahelaa dagaalada 😀
Waxaan u maleynayaa inay ka badan tahay xanaaqa, waa hab looga baxo riwaayadda: qosol
si kastaba ha noqotee, way iska cadahay waana lagu dooday waxa kor u kacaya.
Waxaan u maleynayaa in Linus uu diirranaa wareysiga, ka dib waxaan u arkaa isagoo si gardarro leh ugu caayaya Kay liisaska boostada sabab macquul ah, marka waxaan u maleynayaa inuu waxaas oo dhan u sheegay si uusan dabku usii kordhin.
Waxay ila tahay inay ku filan tahay kernel-ka, wax-ka-beddelka ay codsatay Google, nidaamsan inay gasho waxyaabo aan u dhigmin, runti waligeed ma gelin nidaamyada bilowga, laakiin, waxaan u maleynayaa inay tahay in loo maro tallaabo ka qaad arrinta, waxay ku saabsan tahay qoraalka qoraalka…. Linus-na ma ahan qof dhaha "sifiican, taasi waa wadada, maxaan sameyneynaa, aan sii wadno nuugista", marka ama gaagani waa inuu talaabo u qaadaa dhinaca, xitaa ma qorto koodh ama isagu Waxbaan qaban doonaa, qof walbana wuu qaabeeyaa ……. In server 1 qajaar qaro aniga igu saabsan waxa uu abuurayo, haddii DHAMMAAN distro loo gudbiyo nidaamka, waxaa lagama maarmaan noqon doona in la aado BSD, taas fudud, anigu dan kama lihi waxa uu sameynayo iyo haddii kale, sida aanan u danaynayn waxa dhaca la Hurd, in jidka agtiisa waa waxba.
Sikastaba, iibso waxyaabo badan oo saliid ah, sababtoo ah waqtiga ayaa imaan doona marka RPM ay ku tiirsan tahay nidaamka, sida hadda oo kale waxay rabaan inay dhigaan brtfs ... ilaaheey ... Ma aqaano haddii Google, Microsoft ama redhat ay tahay ka xun
SynFlag = "rinji baaskiil leh"
Weli waxaa jira Gentoo iyo Slackware, waxay umuuqataa inay sii wadi doonaan inay adeegsadaan nidaamyadooda asalka ah ee muddo dheer.
Waxaan rajeynayaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii la jaan qaadi lahaa.
Ma garanayo waxa nacaybku u qabo RPM, marka sida aan fahamsanahay Stallman laftiisu uu halkaas ka doorbiday iyaga. Waxba igama gelin haddii DEB, haddii RPM, haa ... wax kastoo, laakiin jaangooyooyinka ayaa qof walba u fiican. Sida Linus uu sheegay, waa waqtigii loogu talagalay dadka isticmaala Linux Desktop, kuwaas oo aan dan ka lahayn farqiga farsamo ee u dhexeeya DEP iyo RPM illaa iyo inta aad laba-gujineyso oo aad rakibayso.
Si wanaagsan ayaad u socotey, laakiin waxaad ku dhejisey mashiinka dhamaadka
Wixii ku saabsan RPM iyo SystemD… aan ku xasuusiyo inay jirto Alien si loogu badalo xirmooyinka .rpm xirmada aad rabto.
Hadda oo ku saabsan BTRFS, waa uun soo jeedin, maxaa yeelay waxaa jira dad runtii ka cagajiidaya inay adeegsadaan nidaamyo kale oo feylal ah oo dhexdhexaad ah oo xusuusinaya iyaga FAT32 ama NTFS, waxayna doorbidaan nidaamyo aad u adag (sida XFS) ama kuwa ay soo jeediyeen badankood (EXT4).
: ') sida aan kursiga keydka u dhigay Torvalds right, sida saxda ah ee uu leeyahay, oo aan si buuxda u wadaagayo, dhowr ka mid ah doodaha ka dhanka ah Systemd waa falsafad, sidaan horayna u idhi, imika “qof kastaaba wuxuu gashadaa shaadhka BSD, Solaris, Haiku, HURD iyo imisa weirdo ayaa bannaanka taal "... oo la socota" falsafadda "Torvalds oo aan jeclayn, fargeeto, ama aan abuurin wax cusub ... ..
Qaarkood way i faaruqi doonaan, oo kaliya maahan inaan ahay isticmaale Linux ah iyo RedHat wax lacag ah iima siin xD, laakiin waxaan u daayaa tan si aan wax yar u sii daayo ololka http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTI4NDc
oo waxaan si gaar ah u jecelahay weedhan, oo loogu talo galay kuwa kaliya u malaynaya in Systemd ay tahay inuu xawaare ku helo wakhtiga Boot «Systemd About About Speed ​​- Lennart wuxuu leeyahay xawaaraha systemd waa uun saamayn dhinac ah ee qaabeynta waxyaalaha saxda ah…»
iyo sumo, qaar ka mid ah waxyaalaha la soo galay, ama noocyada codsiyada (waxaan leeyahay maxaa yeelay maadaama aysan "u dhigmin" habka) u oggolow tan:
iyo ku saabsan ka mid noqoshada btrfs .. wey cabanaayaan laakiin ma arkeen sababta? …. http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTc3NzU
Errata: «oo anigu ma ihi oo kaliya isticmaale Linux ah iyo RedHat wax lacag ah igama siiso xD»> «oo waxaan ahay kaliya isticmaale Linux ah iyo RedHat wax lacag iima siin xD»
btrfs Runtii waan jecelahay sida ay u shaqeyso, shaqooyinkeeda, laakiin uma fiicna sida ext4 inay iskeed isu hagaajiso markay xumaato, waa inaan dib u habeyn ku sameeyaa, waxaan awooday inaan soo helo macluumaadka, laakiin aan dayactiro nidaamka. Dhanka kale, isla waxbaa igu dhacay aniga oo wata ext4 iyo fsck diyaar ah, oo sidii cusub ah.
Dhibaatadu waxay tahay in qofna uusan rabin inuu fargeeto SystemD u sameeyo sidii Theo de Raadt uu ugu sameeyay OpenSSL. Runtu waxay tahay in nasiib daro qofna uusan fahmin sababaha aan ugu yaraan dadaal loogu bixin si loo hagaajiyo SystemD oo ah iskaashi mashruucan.
Sikastaba, hada waxaan u cusbooneysiin doonaa Opera Blink laanta beta.
Iyo voila: waxaa loo casriyeeyay Opera Blink 25 beta.
Ka sokow, netbook-kayga waxaan ku leeyahay XFS illaa iyo hadda, waxay ku baaba'aysaa bateriga yar ee Debian Wheezy. Runtu waxay tahay in BTRFS wali cagaar yahay dhinacyo badan, sidaa darteed waxaan doortay xalka muxaafidka ah ee laptop-yada sida netbooks.
Sikastaba, Ext4 way wanaagsantahay, laakiin ma xamili karo la-socodsiinta.
Iyo qaamuus buuxa ku habboon ololka wanaagsan.
Oo muxuu Red Hat kuu siin doonaa lacag? waad i wase
Had iyo jeer waxaa jira qof aan fahmin waxa ay rabaan inay tilmaamaan
Sida iska cad waa wax gaar ah, in injineeradiisu ay yihiin dad ka fiican oo laga yaabee inay cadaalad daro tahay in la barbardhigo wax sharaf leh sida geedka oo kale oo leh mashaariic badan oo aan caadi ahayn.
HAHAHA .. ku raac laba kubadood: Kernel ayaa ugu fiican iyo SystemD mashruuc shit ah .. Ninkani (Torvalds) haddii uu garanayo sida loo isticmaalo ereyada hahaha.
Masiixi ahaan: isagu waa Pro-Unix inkasta oo uu jecelyahay isdhexgalka garaafyada.
runtii wax ka badan pro unix waa saaxiib waxa shaqeeya. Waxay ka qaadan doontaa Unix waxa ay shaqeyso iyo haddii inta soo hartay aysan u adeegin inay la kulmaan dhibaatooyinka hadda jira ama baahiyaha oo aad u baahan tahay inaad adeegsato wax aad u kala duwan, kuuma dhibeyso ugu yaraan
Ku jawaab Mirage
Nidaamna maahan gabalka jabiya dhaxalkii hore ee UNIX. Codsiyada sawirada si dhif ah ayey sidan ugu shaqeeyaan »
Bilyan jeer tan. Dhammaan kuwa had iyo jeer ku eedeeya qaar ka mid ah barnaamijyada inay jabinayaan mabaadi'da UNIX, waxaan rajeynayaa inay ka sameynayaan qoraal bash ah oo bogagga websaydhka ah ku soo dejistaya wget, iyaga oo ku akhriyaya wax ka yar kuna dhejinaya curl, haddii kale fikirkoodu ma laha ansax.
Haa, laakiin ma ogtahay in daalacashada sida Firefox ay keydinayaan taariikhdooda soo dejinta sqlite? iyo sqlite waa FOR FARSAMAD BILAASH AH! QOF WAC DENNIS RITCHIE, FIREFOX WUXUU CUNAYAA EYKEYGA!
FUD FUD FUD, waxa kaliya ee ka hadla SystemD.
Waxaan ku bilaabayaa inaan cadeeyo in aan ogolahay in la joogo waqtigii la bedeli lahaa nidaamka, nidaamkaasina wuxuu ila muuqdaa kan ugu fiican ee aan maanta haysanno.
Laakiin taasi maahan sababta aan u diidi doonno cilladaheeda, inaan ku eedeyno qof kasta oo kashifa inay abuurayaan FUD, si aad ahna uga yar la dagaallanka FUD ee ka dhanka ah FUD.
SQLite waa xog-ururin, qaabka ay xogtani ka kooban tahay wuxuu u yaallaa soo-saaraha, waxaad yeelan kartaa int, qoraal, kaasoo si qumman u tagaya sida qoraal cad, ama BLOBs oo ah laba-geesood.
Laakiin kiiska xiisaha leh ee aad sheegayso, xoogaa waad lumisay, waxaad si fudud u furi kartaa feylka Firefox oo leh tifaftire qoraal ah waxaadna u arki kartaa cinwaanada inay yihiin qoraal cad, taas oo ah, dhammaantood is urursaday maxaa yeelay tifaftirayaashu ma yaqaanaan qaab dhismeedka SQLite, laakiin haa Waxaad dooneysaa inaad aqriso iyaga oo ku amraya tiirarka, Firefox waxaad kala soo baxeysaa sheykab la yiraahdo SQLite manager waxaadna ku arkeysaa iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Si ka duwan waxa ku dhaca SystemD ee kugu qasbaya inaad isticmaasho joornaal si aad u aqriso.
Waa inaad aqbashaa iibka iyo dhibaatooyinka, markaa waad ka shaqeyn kartaa inaad xalliso tan dambe.
waxaad si fudud ugu furi kartaa feylka Firefox tifaftire qoraal ah oo aad u arki kartaa cinwaanada sida qoraalka fudud,
Tani waa been, waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso, xarig kale ayaa ka soo muuqan doona shaashadda, iska cad laakiin SQLite waa qaab labalaab ah sida kumanaan qaabab kale oo binary ah oo aan maalin walba isticmaalno. Waa wax aan la aqrin karin isha qaawan. Ma aqaano meesha aad ka helayso inaad u arki doontid cinwaanno sida qoraal cad, xadhkaha ayaa boodaya laakiin ma awoodi doontid inaad u akhrido feylka qaab qoraal cad qaab la isku halleyn karo.
Caqli ahaan adiga kuu gaar ah, SQLite ayaa kugu qasbeysa inaad adeegsato softiweer si aad u aqriso waxa ku jira, taasna waxaa ugu wacan feylasha labada nooc waa sidaas. Taasi kaliya joornaalku wuxuu u jiraa inuu akhriyo diiwaanada laba-geesoodka ah ee 'SystemD' oo macnaheedu yahay inay jirto hal aqrin oo keliya oo hirgelinta qaabka faylkaas ah, ma ahan in Lennart, Torvalds, iyo Illuminati ay isku dayayaan inay u beddelaan Linux-ka windows-ka sida uu u muujinayo ololaha 'Boycott' iyo 'SystemD'.
Dhibaatadu waxay tahay markaan u malayno in faylka binariyuhu yahay "sheydaan", waxa aan ku weydiinaya haddiiba ay dhacdo inaadan ku baraarugin waa in haddii aan ku dabaqno isla falsafadda Nidaamka wax u dhima nidaamka kale uu burburo. Xaqiiqda ah in mashaariicda sida SystemD ama kuwa kale ay tahay in lagu falanqeeyo aragtiyaha kale ee softiweerka, oo aan laga helin tan "waxay ku jabsan tahay wixii aan waligeen sameyn jirnay, sidaas darteedna waa habka saxda ah." Waad ku mahadsan tahay maskaxdaas waxaan wakhti badan ku qaadanay iyada oo aan xitaa ka fekerin suurtagalnimada in la beddelo init (markaa dadka ku jira runit iyo kuwa kale oo badan ayaa bilaabay inay ka fikiraan tan).
Ma aqaano inaad aqoon u leedahay fikradda keydka macluumaadka, laakiin waa wax aan qaab lahayn, waxay leeyihiin NOOCYADA XOGTA badan, waana kuwan kuwa leh.
Waxaad sifiican uguheysan kartaa xargaha qoraalka, lambar ama xitaa sawirada isla keydka xogta. Mid kasta oo leh qaabab kala duwan.
Iyadoo maskaxda lagu hayo (waxaan rajeynayaa) inaad fahantay inay qalad tahay inaad tiraahdo SQLite waa qaab qaab labajibaar ah, maadaama aysan feyl aheyn sidan oo kale, kamahadleysid qoraal dukumiinti, a .pdf ama a .jpg.
Hadda, waxaan u arkaa wax lagu qoslo inaad igu casuuntid inaan isku dayo wax aad arki karto inaadan sameyn.
Waa kuwan caddaymahaygu:
Maaha in "xarig kale" la arko, iyagu waa cinwaanada oo dhan waana la akhrin karaa. Haddii ay noo caddaato waxa uu yahay xog-ururin, waxaan ogaan doonnaa inay sax tahay in sidaa la yiraahdo "XOGTA WAA LOO HAYSANAYAA QORAAL QORSHE AH".
Ma aqaan sida aad isugu kalsoonaan karto taas.
Caqligaas fudud ee aad igu tilmaamayso waa sababta oo ah waxaad si qaldan u fasirtay ereyadayda.
Haddii aan raaco waxaan dhihi lahaa xitaa qoraalada cad waxay KU QASUULAYA inaad isticmaasho softiweer qaar si aad u aqriso waxyaabaha ay ka kooban yihiin, waana run, ama sidee u aqrin laheyd adigoon isticmaalin Kate, Notepad, nano ...?
Wixii aadan fahmin ayaa ah in diiwaanada SystemD la aqrin karo KELIYA iyada oo la adeegsanayo joornaal / joornaal Si ka duwan taariikhda Firefox ee aad u akhrin karto iyada oo khalkhalsan tifaftire qoraal kasta ama nidaamsan oo leh barnaamijyo badan oo kala duwan:
Waxaan ku celinayaa haddii ay dhacdo inaadan akhrin markii ugu horeysay:
"Waan ku raacsanahay inay tahay waqtigii la beddeli lahaa, nidaamkaasna wuxuu u muuqdaa midka ugu fiican ee aan maanta haysanno."
Waana inaan si buuxda u fahmay faa'iidooyinka isticmaalka binaries (Khatarta yar ee musuqmaasuqa xogta, raadinta dhakhsaha badan ...) laakiin sidoo kale faa'iido darradeeda (Ku tiirsanaanta, aad ayey u adagtahay in laga soo kabto haddii ay dhacdo musuqmaasuq xogta ...) Diidmada faa'iido darrooyinkaasi waa , haddii aysan ahayn laakiin ugu yaraan sidii wax aan macquul ahayn oo aan loo tixgelinaynin faa'iidooyinka.
Inaad arki karto xadhkaha macnaheedu maahan in faylka la khaldami karo. Ha u oggolaan in Kate ay ku tusto astaamaha u dhexeeya, sidoo kale.
Si kastaba ha noqotee qeexitaannada faylalka joornaalka nidaamsan ayaa ah kuwa dadweynaha, sidaa darteed qoritaanka hirgelintaada akhristaha joornaalku waa wax yar, xitaa haddii aadan rabin inaad adeegsato C API-ga ay kiiskaas u bixiyaan. Sidoo kale qaabab ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo furan oo aan la soo koobi karin ah, API-yada iyo maktabadaha ayaa loo diyaariyey si loogu farsameeyo barnaamijkaaga.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka, haa dabcan iyagu way leeyihiin, laakiin taasi waa halka ay ku timaaddo shakhsiga, waxay ila tahay aniga fisqi sida ay kuwa sharka lihi ugu boodaan inay u buunbuuniyaan "nidaamku wax walba wuu nuugi doonaa", "waxay ku qasbayaan inay adeegsadaan nidaam", " Linux waxay noqon doontaa daaqadaha "," biilka albaabka ayaa soo galaya gurigaaga oo dila qoyskaaga ", waana FUD, waxaad u dhigtay sidaad u dhigtay, ma weerarayo dhibaatada taagan laakiin waxay isku dayeysaa inay kaa nixiso.
Ma waxaad igu jees jeesaysaa
Sifiican ayaan ugu arkaa weedhaha SQL ee ku jira binary-ka faylka .sqlite ee GNU Nano. Iyo xigashada @staff:
[…] Si ka duwan taariikhda Firefox taas waad ka akhrisan kartaa khalkhalka leh tifaftire qoraal kasta Ama lagu dalbado barnaamijyo badan oo kala duwan:
Tani waxay u dhacdaa sabab la'aanta sida loo maareeyo MySQL / MariaDB.
PS: MS SQL Server wuu ka sii xun yahay.
Waan aqrin karaa / qori karaa SQL, asal ahaan waa xanuun dameerkeyga inaan u akhriyo sqlite qaab qoraal ah wixii adeegsi ah oo ficil ah taas oo aan ula jeedo, waana u qalantaa inta ay le'egtahay kiiskaas sida faylka binary, waxaad u baahan tahay qalab si aad ugu hesho qaab wax ku ool ah iyo aaladaha ay heli karaan.
Waxay la mid tahay diiwaanada nidaamsan, qeexitaanka laba-geesoodka ah ayaa la heli karaa oo waad qori kartaa akhristaha (inkasta oo aan lagugula talin) sidaad u aragto inay kugu habboon tahay, ama isticmaal aaladda hadda jirta si aad u hesho, ama isticmaal midka jira C API.
Oo hadaan rabno inaan tusaalooyin ka soo qaadno faylalka kale ee binary-ga ah waxaad haysataa rpmdbs iyo codsiyo kale oo badan oo keydiya goobaha, keydadka iyo kuwa kale qaabka binary (MariaDB sidoo kale ikhtiyaar ahaan ayey u sameysaa faa iidooyinka @staff ku xusan), laakiin dooddan ayaa ku saabsan wuxuu noqday hadal ku saabsan ka fogaanshaha qodobka wadahadalka sida ugu farsamada badan.
“Inaad arki karto xarigaha micnaheedu maahan in feylka la turjumi karo. Ha u oggolaan in Kate ay ku tusto astaamaha u dhexeeya, sidoo kale. »
Taasi waa arrin kale oo gebi ahaanba ah, waxaad dhahday waxay ahayd qaab ikhtiyaari ah oo horayba waa loo muujiyey, xitaa markaad qabsato, taasi waa been.
Hada waxaad ka badalaysaa doodaada "Waa laba-geesood iyo waxa ay tiri lama aqrin karo" ilaa "Waa binary waa la aqrin karaa laakin lama sifeyn karo", markalena waxaad ku dhacday khalad, maadaama sababta aadan si nidaamsan u gorfeyn karin waa: maxaad u garan weyday qaab dhismeedkeeda.
Ku soo qaado feyl CSV qoraal cad oo qumman, ku fur Kate waxaadna arki doontaa in aan lagu dalbanin hab la aqrin karo sidoo kale. Tan waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaabkeeda.
Marka waxaan u maleynayaa in dhibaatada halkaan ka jirtaa ay tahay inaadan si cad u cadeyn waxa ay yihiin keydadka macluumaadka, ama farqiga u dhexeeya qaabka iyo habeynta.
«… Marka qorista hirgelintaada akhristaha joornaalku waa wax aan qiimo lahayn…»
Wax yar maahan, in laga bilaabo maxaa yeelay maahan qoritaanka akhriste. Haddii aadan haysan ku tiirsanaan, waxaad abuuri kartaa kun akhriste laakiin joornaal / joornaal waa MANDATORY, maxaa yeelay iyagu waa kuwa qora joornaaladaas.
"Taasina waa FUD, wax kasta oo aad dhigto, ma weerarayo dhibaatada taagan laakiin waxay isku dayeysaa inay kaa nixiso."
Waxaan si aad ah ugu cadeeyay faalladayda koowaad inay jirto run badan, waxaa jira FUD oo kahortaga SystemD, laakiin waxaadan arkeynin inaad si sax ah wax usameyso.
Waxaad ku abuureysaa FUD, waxaad ku dhaheysaa waxyaabo aan run ahayn mowduucyo gooni ah, halkii aad ku weerari lahayd su'aasha farsamada.
In la yiraahdo SystemD waxay leedahay dhibaato X laakiin waa caadi maxaa yeelay qaybo kale oo badan oo nidaamka ka mid ah ayaa sidoo kale leh, waa been abuur xun.
«Xumaan badan, qalbi qaboojinta nacasyada», halkan ayay ku leeyihiin.
Waana inay aniga ila tahay wax layaab leh aniga oo ah ProSystemD inaan ahay, waa inaan ka difaacaa "kuwa wax xumeeya ee buunbuunin" ka "dhiirrigeliyeyaasha yareeya"
* Semantiyan ahaan, ma ahan nidaam ahaan.
Waan ku raacsanahay, sida ay kubadaha ugu jebiyaan falsafooyinkaas raqiiska ah ee 20 sano ka hor. Xaqiiqdii waqtigiisii ​​qof ayaa yiri, laakiin maadaama ay ka tagayaan labalaabnimo una gudbayaan luqad qoran, iswaafajinta ma noqoneyso 100%, welina waan joognaa. Raac horumarka oo haddii aadan jeclayn inay fargeeto abuuraan ama ay fikradahooda u diraan Fedora, ii soo sheeg.
Uguyaraan Red Hat waa shirkad yaqaana sida loo dhagaysto (maaha sida Microsoft ama Oracle), Theo de Raadt wuxuu leeyahay kubbado ka badan inta wiil kasta oo hooyadiis ah oo ka fikiri kara inuu ka hor yimaado mashruuc uusan xitaa danaynayn inuu wax ku darsado.
Tusaalooyin caan ah oo fargeetooyin caan ah: MATE (oo ka dhashay GNOME 2 ee gabalkiisu dhacay), Cinnamon (waxay ka timid iswaafajin la'aanta isticmaaleyaasha ee muuqaalka GNOME 3 UI), LibreSSL / BoringSSL (wuxuu ku dhashay mahadnaqista OpenSSL, oo ​​la mid ah xaaladda dayactirka SystemD iyo xaalada ay hada ku sugan tahay), LibreOffice (oo ka dhalatay la'aanta dayactirka OpenOffice ee Oracle kadib markii ay heshay Sun Microsystems), MariaDB (xaalad lamid ah LibreOffice, laakiin leh MySQL), Audacious (oo udhashay geerida XMMS), iyo sidaas Waan sii wadi karaa magacaabista tusaalooyinka wanaagsan ee fargeetooyinka.
1. Maxay yihiin mabaadi'da UNIX ee qof walba ka hadlo (oo u muuqda inuu kugu qasbayo inaad isticmaasho qoraallo bash, iwm)?
2. Si kastaba ha noqotee, cidna kuma eedeyn karaan inay leeyihiin ama ay raacayaan mabaadi'daan iyaga mooyee, maxaa yeelay qofna ma uusan u dirin Linux inuu ursiiyo waxa ugu xun ee UNIX ama wax ah, sidoo kale cidina uma sheegin inayna allifaan astaamo u gaar ah ee ay tahay inay koobiyeeyaan oo ay mid kale. Hadda ma waxaad ka cabanaysaa oo ka xishoonaysaa taas? Hadday sidaas tahay, taasi waa ila fiicantahay, laakiin waa inay masaxaan oo ay dib uga bilaabaan doon kale, maxaa yeelay Linux waligeed waxay ahayd 'wannabe Unix', taasi waa sida ay ku dhalatay, taasi waa sida ay ku soo barbaartay iyo sida ay u noolayd.
Waxaan u maleynayaa inay tixraacayaan:
- Samee hal shay oo keliya, laakiin si fiican u samee.
- Wax walba oo ku jira feyl qoraal ah.
raadi mabda'a dhunkashada wikipedia:
Mabda'a 'KISS' wuxuu sheegayaa in nidaamyada badankood ay si fiican u shaqeeyaan haddii laga dhigo mid fudud marka loo eego haddii laga dhigo kuwo adag; sidaa darteed, fudeydka waa in loo hayaa ujeeddo muhiim ah oo naqshadeynta, waana in laga fogaadaa isku-dhafnaan kasta oo aan loo baahnayn. "
Jawaab si loo caawiyo
Waad ku mahadsan tahay jawaabta labadaba, hadda waan ogaan doonaa waxaad ula jeeddo.
Aniga oo ka hadlaya SystemD, waxaan la kulmay tan miiska shaqada loo isticmaalay kuwa qaata erayga kuwa raba inay "qaadacaan" SystemD (sidoo kale Fedora adaa leh iyo Isbaanish).
tanna waxaa lagu muujiyey in nidaamku halkan joogo oo runti linenku ku taageerayo macno gaar ah iyada oo ay ugu wacan tahay halbeegga maadaama uu siinayo xalal dhab ah oo wax ku ool ah dhibaatooyinka dhabta ah. waxay ku saleysan tahay ficil ahaan, ma ahan falsafado jaban 40 sano kahor !!!! (falsafado aan khusayn xaaladaha hadda jira)
Jaangooyuhu wuu fiican yahay, laakiin haddii aad ku aragto faallooyin ku jira nambarka nidaamka, u dhaqso si aad u rabto. Ma ahan wax culus, waan ogahay mashruuc la yiraahdo OpenSSL (Ma aqaano inuu kula mid yahay iyo in kale) taas oo ku jirtay xaalad la mid ah, waadna ogtahay waxa dhacay.
wax la arko. OpenSSL waxaa ilaalinayey koox aad u yar oo horumariyayaal mutadawiciin ah waqtigooda firaaqada, iyo ilaa aasaaska Linux-ku lug yeesho, waxay lahayd miisaaniyad yar. systemd, dhanka kale, wuxuu taageero ka helayaa boqolaal horumariyayaal madaxbanaan, taageero maaliyadeed oo adag oo ka timid dhowr shirkadood oo dhigay horumariyeyaal lacag leh (mana ahan kaliya shabakadda Han, intel, Samsung iyo Google ayaa iyaguna leh horumariyayaal sidoo kale) sidaa darteed way kala duwan yihiin 100% kiisaska. nambarka nidaamka ayaa aad loo hubiyaa oo wuxuu leeyahay taageero aad u badan.
Hada dhawaaqa richard stalman iyo fsf on systemd ayaa maqan kuwaas oo soo afjari kara dooda ama wax walba qarxin kara
Weli waxaan u maleynayaa in soo saarista mowduuca nidaamsan loogu talagalay kaliya Linux inta badan diidmada waa su'aalo kaliya oo dabeecad siyaasadeed ah, kuwaas oo u eg meel ay ku tarmayaan koox gaar ah oo xagjir ah oo jecel aragtiyaha shirqoolka iyo dhammaan bucshiradaas.
Waxaan kale oo u maleynayaa in haddii nidaam ahaan halkii laga horumarin lahaa muranka ka taagan yahay ee Lennart Poettering, dadka ka socda wareegga FSF ay sameeyeen, in qofna uusan ku doodi karin nidaamka.
Markaad fiirineyso faallooyinka 'phoronix' ee kujira xiriiriyaha gudbay
Waa inaan qirto in calooshaydu waxyeello ka soo gaadhay qosolka badan ... Waxaan ka helay faallooyinkaan:
08-31-2014, 10:17 PM # 9
atari314 waa xubin Joog Junior ah
Metastasis… horumarinta koriimooyinka halista ah ee labaad ee masaafo ka fog goobta aasaasiga ah ee kansarka
Waxa jira dad hadiyad u leh inay wax u sheegaan si toos ah oo iskumid ah .. 🙂
Linusna, waxaan filayaa inuusan rabin inuu abuuro khilaaf aakhirkana ay u arkaan inuu yahay kan cadaabta u diraya kan la hor dhigayo, taas oo ah, inuu daryeelayo wuxuu leeyahay, maxaa yeelay waqtiyadii ugu dambeeyay dad badan ayaa ka hadlay cayayaanka jidadkiisa ...
Qoto-dheer wuxuu ogyahay inta uu oggol yahay, taasi waa sababta uu u xusayo waxyaabo uusan jeclayn ama uu u arko inay si xun ula kulmeen.
Waa hagaag dadow, way dhacday wixii aan sheegayay ... way iska cadahay, frankestein-ka wuxuu noqday mid aad u khatar badan oo baaxad weyn ... marka FORK !!
Haddii marwooyin, waxaa loogu yeeraa wax aan faa'iido lahayn, waxaad u fasiri kartaa mid aan waxtar lahayn ama sida "wax ka yar u isticmaaleysa", oo si habboon loogu magacaabay.
Uselessd: Nooca Ka Xayuubsan Ee Nidaamka
Akhriso su'aalaha iyo jawaabaha bogga mashruuca, xitaa waxay kadhigi doonaan mid la jaan qaadaya freebsd.
Hadda waxaan rajaynayaa in dad badani ku soo biiraan oo ay ka mid noqdaan dhammaan barnaamijyada aan mushaharka laga siin shirkadaha si ay u gaadhaan beddelka muddada dheer la sugayey.
Tox: Isha Furan ee Skype